Maurice Tsihiavonana : Alevina anio any Manjakandriana -
AccueilSongandinaMaurice Tsihiavonana : Alevina anio any Manjakandriana
06/07/2018 admintriatra Songandina 0
Rehefa avy nandrasana tetsy amin’ny trano fonenany tetsy Ambatobe Andrefana, dia alevina anio any Ambohidahy Manjakandriana ny nofo mangatsiakan’i Maurice Tsihiavonana Ramanandraibe, izay mpanao gazety sady mpamakafaka ara-politika. Amin’ny 8 ora sy sasany maraina no hiainga etsy amin’ny trano fonenany ny nofo mangatsiakany, ary entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ao amin’ny fiangonana FJKM Ambohidahy Fitiavana Manjakandriana. Ny tononkira ao amin’ny fihirana FFPM : 518, no teny entina hitrotroana am-bavaka ny vata-mangatsiakany izay manao hoe « rehefa vita ny asako ety, ka ny fanahiko raisina ery, miara-mitoetra aminao Tomponay no hasambarako mandrakizay ».
Mpanao gazety ary fantatra teo amin’ny fahaizany nanao famakafakana politika i Maurice Tsihiavonana, ary efa maromaro ireo onjam-peo sy fahitalavitra nitondrany izany famakafakana izany tao anatin’ny 30 taona nidirany teo amin’ny asa fanaovan-gazety. Ireo rehetra niara-niasa taminy dia samy niaiky fa nampita sy nizara ny traikefany tamin’ireo zandry zanaka taty aoriana izy. Ankoatra ireo zanaka naterany 5 mianadahy sy ireo zafikely, dia mahatsiaro ho kamboty ihany koa ny toerana niasany farany, ny On Air Radio/TV ary ireo izay nioty traikefa taminy.
Na teo aza izay fiovaovana toeram-piasana izay, dia anisan’ireo fatra-panaja ny foto-kevitra ijoroan’ny onjam-peo na ny fahitalavitra iasany i Maurice Tsihiavonana. Nahafantarana azy rahateo ny fananany fomba fijery miavaka na dia vaovao mitovy aza no mitranga eo amin’ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena.
Banga tanteraka ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety nilaozan’i Maurice Tsihiavonana. Mandria am-piadanana.